DAMACII GUMAYSTADA & DOORKA CULAMAAUDIINKii somaliyeed | Ashaacira's Blog
← taariikh nololeedkii Sheekh Sabru-diin oo kamid ahaa culimadii culuumta diinta somaliya kudhex faafiyay
taariikhda nololeedkii Shiikh Mansuur →
DAMACII GUMAYSTADA & DOORKA CULAMAAUDIINKii somaliyeed
DAMACII GUMAYSTADA & DOORKA CULAMAAUDIINKA
(1) JIHAADYADA CULAMADA KA HOR QARNIGII 19AAD
Cadowgii Islaamka ee gumeysatadu wuu u dulqaadan waayey nuurkii Islaamka ee marba marka ka dambeysa ku soo kordhayey Geeska Afrika; waxeeyna ugu horayntiiba adeegsadeen dowladii kirishtada ahayd ee Xabashada (Ithopia) ee deriska la ahayd Soomaaliya.
Geesiyadii Soomaaliyeed ee culamaa’udiinku hogaaminiyeen waxeey cadowgaas kala hortageen jihaad naf iyo maalba ah. Jihaadyadaas kuwii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa.
➽ Sh. Cumar Walasmac.
Shiikh Cumar Walasmac wuxuu ahaa Amiirkii Mu’miniinta ee waqoyiga iyo galbeedka Soomaaliya isla markaana ahaa aasaasihii mamlikooyinkii todobada ahaa ee Ifaat, sida ay caddeeyeen taariikhyahanada uu ka mid yahay Imaam Maqriizi.
Shiikhu wuxuu maamulkiisii dhinaca Zaylac bilowday 608-dii Hijriyada, wuxuuna habeeyey difaacii diinta Islaamka iyo ehelkeeda laga difaacayey boqortooyadii Xabashada (Ethopia) iyo cawaankeeda. Iimaamku wuxuu ka soo hooyey guulo taariikhda galay. Halgankii Imaam Walasmac Culammada hogaamiyeyaasha ah ee halkiisa ka sii wadday waxaa ka mid ahaa:-
· Sheekh Xaqu-diin ibnu Amiir Cumar (Xaqu-diinul-awal),
· Sabru-diin ibnu-Muxammad.
· Xaqu-diin ibnu Axmad, (Xaqu-diinu-saani)
· iyo Imaamyaal kale.
➽ Sh. Sacdu’diin Ibnu Axmad
Sh. Sacdu-diin Allaha ka raali noqdee ilaa iyo hada waxuu ka mid yahay culamada waa wayn ee lagu ziyaarto magaaladda Zaylac wuxuuna kaalimaha ugu muhiimsan kaga jiraa Imaamiyaalka Soomaaliyeed ee taariikhda ugu wayn ku leh Geeska Afrika.
Sh. Sacdu- diin dagaalkii ugu adkaa wuxuu gaalada ku qaaday 735 Hijriyada, wuxuuna ahaa ninkii ugu guulaha badnaa ilaa iyo waqtigii Imaam Axmed Ibraahim.
Sheekh Sacdu-diin waxay kutubta taariikhda ee wax ka qortay ku tilmaamaan inuu ahaa caalim aad ugu wanaagsan diyaarinta khudbadda iyo dhiirra gelinta mujaahidiinta jihaadka loo diyaarinayo.
Waxaa shicaar iyo halku dhigba u ahaa ALLAAHU AKBAR. Marka ciidankiisu Jihaadka geleyaan waxay si jahar ah kor ugu qaadi jireen Suuratul-Caadiyaat. Wuxuu ahaa weli Ilaahay oo Ahlul-kashfi ah ru’yooyinka uu cabbiro waxay noqon jireen kuwa la arko, gaar ahaan kuwa ku saabsan jihaadka. Marka dagaallada luga guulaysto gaalada wuxuu ciidanka iyo dadweynihiisa u qali jirey geel, lo iyo ari uu ku salaynayo Shukri naq uu ku xusayo guusha uu Ilaahay Muslimiinta siiyey.
Imaamku waxa kale oo uu caan ku ahaa caddaalad, geesinimo iyo sare u qaadidda himmada ciidammada. Wuxuu ku shihiiday Jasiiradda Sacdu-diin oo isaga loogu magac daray. Wuxuu Allaha ka raalli noqdee ifka ka tegey isagoo sidiisii iyo si ka wayn loo Jecel yahay.
➽ Sheekh Sabru-diin
Jihaadyadii Sheekh Sabru-diin waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaa halgannadii ay culamaa’udiinka Soomaaliyeed hoggaaminayeen. Arrimaha sida wayn loogu xasuusto Sheekh Sabru diin waxaa ka mid ahaa snaddii 758 Hijriyada, oo ku began 1349-tii, markii uu jihaadyadiisii ka soo hooyey guulo faraha badan ayuu wusaradiisii ku yiri: “waxaannu jihaadkan ku jirney muddo aad u fara badan sidaas darteed waxaan ku talin lahaa in aan u soo jeesanno hagaajinta maamulka magaalooyinka aan ka talinno”; go;aankaas oo la qaatay.
Sheekh Sabru-diin Allaha ka raalli noqdee markii uu ku guulaystay xasilinta iyo horummarinta dhulkii uu ka talinayey wuxuu halkiisii ka sii waday jihaadyadii uu ku difaacayey diinta, dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Halgannadaasi waxaa ka mid ahaa kuwii dagaalladiisa ugu caansanaa ee uu ku jebiyey qabaa’illadii gaallada loo yiqiinney oo uu ku qabsaday guud ahaan magaalooyinkoodii taariikhdu markay ahayd 1352-dii Miilaadiyada. Waxaa kaloo ka mid ahaa halgammadaas dagaalkii uu ku burburiyey taliskii boqorka Xabashida taariikhdu markay ahayd 1421 Miilaadiyada; waxaana halkaas ku dhintay boqorka Xabashida.
➽ Sh. Mansuur
Sheekh Mansuur Sheekh Sacdu-Diin Axmad wuxuu ku guulaystey in uu noqdo Imaam ay taariikhda Soomaaliyeed iyo tan Muslimiintuba ku xusto inuu caabbiyay jab waynna u gaystey boqorkii Xabashida Isxaaq Daawuud ee xukumayey 1414–1429. Boqor Isxaaq Daawuud wuxuu caan ku ahaa la dagaallanka Muslimiinta Geeska Afrika. Imaam Mansuur muddadii uu jihaadka wedey wuxuu Xabashidii gumaysi doonka ahayd ka qabsaday dad gaaraya 30,000, waxaana ka Muslimay in ku dhaw 10,000. Arrintani waxay boqorkii Xabashida ee Isxaaq ku qasabtay inuu madaxdii reer yurub u dirsado qoraal uu ku waydiisanayo inay gacan ka siiyaan dagaalka uu kula jiro Imaam Mansuur. Wuxuu dhintay boqor Isxaaq Daawood 1429kii Miilaadiyada isagoon weli jawaabtii gaalada reer Yurub soo gaarin.
➽ Sheekh Jamaalu-Diin
Sheekh Jamaalu-diin binu Sacdu-diin wuxuu muddadii uu xukunka hayey halkii ka sii wedey halgankii uu aabbihii Sacdu-diin ku difaacay diintiita, dadka iyo dalka Islaamka. Guulihii jihaad ee uu Muslimiinta u soo hooyey Sheekh Jamaalu-Diin kasa koow, wuxuu caan ku ahaa Alla ka cabsi, fadli iyo caddaalad oo si dheeraad ah loogu ammaano. Dhacdooyinka sheekh Jamaalu-diin caddaaladdiisa iyo Alla ka cabsigiisa lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa:- wiil uu dhalay ayaa wiil kale gacan ka jebiyey markaas ayuu sheekhu isugu yeeray madaxdii iyo wax garadkii. Wuxuu Sheekhu amray madaxda in wiilkiisa lagu ciqaabo qisaas la eg midda uu gaystey. Madaxdii iyo wax garadkii waxay ka codsadeen sheekha inaan wiilkiisa la qisaasin oo aan gacanta laga jebin. Markaas ayuu ka diiday, wuxuuna markii wiilkiisa la qisaasayey ku yiri;
dhedhemi xanuunka jabka sida aad xanuunka u dhedhensiisey walaaalkaaga muslimka ah. Sheekhu xukunka iyo halganka ummadda wuxuu hoggaaminayey 840- ilaa 847-dii Hijriyada; wuxuuna geeriyoday 1431-dii Miilaadiyada.
➽ Garaad Aboon
Garaad Abboon Garaad Aadish wuxuu caan ku ahaa u gar gaarista diinta Islaamka iyo ka hortagga gumaysatada. Arrimaha taarikhdu sida sharafka leh ugu xusto waxaa ka mid ahaa in maamulkiisii uu ka soo dhex baxay caalimkii geesiga ahaa ee Imaam Axmad Ibraahiim oo loo yiqiin Axmad Gureey. Imaam Shahaabu-diin wuxuu kitaabkiisa Futuuxul-Xabasha ku yiri:- Garaad Aboon wuxuu madaxnimda hayey 7- sano; wuxuu u istaagey fulinta xaqa, faritaanka macruufka iyo reebista munkarka; wuxuu baabi’yey burcaddii jidadka goyn jrtey; wuxuu mamnuucay cabitaankii khamriga iyo cayaarihii xuxumaa; waxaa cammirmay magaalooyinkii; wuxuu aad u jeclaa una qadarin jirey Asharaafta, Fuqahada, Suufiyada iyo guud ahaan culamada; wuxuu si wanaagsan u hantay maamulkiisii; wuu hagaajiyey dadkii uu xukumayey; waxaana ciidankiisa ka mid ahaa Sh. Axmad Guray.
➽ Imaam-Axmed Axmed Gurey